हिमेशरत्न बज्राचार्य - कान्तिपुर समाचार
हालै चीनको एक सहरमा लगातार पानी पर्दा बाढीको समस्या देखियो  ।
मेयरलाई चुनौतीका चाङ
‘मोनो रेल हामी सबैको सपना हो,’ काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मोनोरेल सम्बद्ध एक कार्यक्रममा भने, ‘तर यो यस्तो काम हो, सुरु गरे पनि किन गर्‍यौ भन्ने हुन्छन् । गरेन भने किन गरेनौ भन्ने पनि हुन्छन् ।’
ट्वान्टी–२० ले ल्याएको सम्भावना
क्रिकेटको पूरा इतिहास नै पल्टाउने हो भने पछिल्लो एक दशकमा जति परिवर्तन भएको छ । त्यो यसअघि कहिल्यै पनि भएको छैन । माथिल्लो दर्जाको क्रिकेट भनेपछि धेरै लामो समय टेस्ट क्रिकेटमात्रै थियो ।
हिमेशरत्न बज्राचार्यका लेखहरु :
बंगलादेशमा भइरहेको साफ च्याम्पियनसिप २०१८ को पहिलो खेलमा पाकिस्तानविरुद्ध हारेपछि नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना नाजुक बनेको थियो । तर, भुटान र आयोजक बंगलादेशलाई हराएर नेपालले अन्तिम चारको तय गर्‍यो । समूह चरणको खेलसम्म उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै मिडफिल्डर सुनील वल नेपाली फुटबलमा नयाँ स्टारका रूपमा उदाएका छन् ।
साफ च्याम्पियनसिपः अन्योल र अनिश्चितताको रोमाञ्च
फुटबलमा न त जितको उन्मादले काम गर्छ, न हारको निरासाले । साफ च्याम्पियनसिप २०१८ को समूह ‘ए’ मा दुई खेल जितेर न त बंगलादेश ढुक्क हुन सकेको छ । न दुई खेल हारेको भुटानले चाँडै घर फर्कने मनसाय बनाएको छ । यही हो, फुटबलको रोमाञ्च ।
संयुक्त राज्य अमेरिका २७७९५३ ७१५२ ९८२३
जर्मनी ९११५९ १२७५ २४५७५
चीन ८२५१८ ३३३० ७६९२३
हाल १,०९९,३८९ ५८,९०१ २२६,६०३
रोग र भोकविरुद्ध सँगसँगै लडाईं
गंगा बीसी चैत्र २२, २०७६
मान्छेलाई रोग र भोकको समस्या एकैचोटि भयो भने के होला ? त्यो खतरनाक हुन्छ । यतिबेला विश्वका अधिकांश देशहरुमा रोग (कोरोना) र भोकविरुद्धको लडाई छ...
आमसभादेखि आममानिस डराउने दिन आएकै हो त ?
ध्रुव सिम्खडा चैत्र २२, २०७६
यतिबेला संसारभरिका सबै मानिसको एउटै नारा छ ः ‘सोसल डिस्ट्यान्स कायम गरौं । भीडभाडमा नजाऔँ । प्राणघातक कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) बाट बच्न घरभित्रै बसौँ ।’